ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ ထမင်းမြိန်၊ဟင်းမြိန်စေတဲ့ မြန်မာတို့အကြိုက် အထောင်းများ ???????????? မရမ်းသီးထောင်း၊ ငပိထောင်း၊ ငရုတ်သီးဆားထောင်းနဲ့ အခြားထောင်းနည်းများ ( အပိုင်း ၁ ) - Myannewsmedia
ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ ထမင်းမြိန်၊ဟင်းမြိန်စေတဲ့ မြန်မာတို့အကြိုက် အထောင်းများ ???????????? မရမ်းသီးထောင်း၊ ငပိထောင်း၊ ငရုတ်သီးဆားထောင်းနဲ့ အခြားထောင်းနည်းများ ( အပိုင်း ၁ )
By phyoPosted on June 25, 2019 June 25, 2019
မရမ်းသီးထောင်းနည်း (မရမ်းသီးကိုငပိမပါပဲ ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ထောင်းထားတာလေးပါ)
အရင်ဆုံး မရမ်းသီးနုနုလေးတွေကိုထပ်ခြမ်းခွဲ ရဆေးပြီးဆားရည်စိမ်ထားပါ။ ဒါဆိုမရမ်းသီးက မမဲတော့ပဲစိမ်းနေပါမယ်။
ပုဇွန်ခြောက်က ဆီနဲ့တွေ့ပြီးပွလာတော့ တစ်မျိုးလေးစားကောင်းတယ်ရှင့်…
မူရင်းပို့စ်ပိုင်ရှင်များအား လေးစားစွာ Credit ပေးပါသည် ????
သွေးတိုးရှိတဲ့သူလဲစားလို့ရတယ်။ ဆီမြှုပ်အောင်ထည့်ထားရင်အကြာကြီးလဲခံတယ်။ အလုပ်သွားရတဲ့သူတွေ တစ်ပတ်စာထောင်းထားရင် ထမင်းမြိန်မြိန်စားလို့ရတယ်။ အရမ်းခံတွင်းမြိန်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူဗမာဥ (၅) လုံး
ရှောက်သီးစိမ်းစိမ်းအနေတော်၁လုံး(ရှောက်သီးက အဝါရောင်သန်းပြီးမှည့်နေရင် အရည်ရွှမ်းလို့မကောင်းပါ။ ခါးတတ်သည်။)
ငပိကိုမွှေးရုံလေးမီးကင်ပါ (တူးသွားရင် ခါးပြီးငပိအနံ့လည်းသိပ်မမွှေးတော့ပါ)
ငရုတ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူကို မညက်တညက်ထောင်း
ပြီးရင် ငပိပါ အချိုမှုန့်အနည်းငယ်နဲ့ ထောင်းပြီးမှ
ဆားအနည်းငယ်နှင့်နယ်ပြီး ငပိထဲထည့်ထောင်းပါ (နှံ့ရုံဖွဖွလေးထောင်းပါ၊ ရှောက်သီးဖတ်တွေကြေမသွားစေရ)
သတိထားရမှာက ငပိဖုတ်ထားတာကို အပူအတိုင်းထည့်ထောင်းရင် ရှောက်သီးကခါးသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငပိမီးဖုတ်ထားတာလုံးဝအေးသွားမှ ထောင်းပါ…
ပြီးရင် ငရုတ်သီးထောင်းပါ။ ပုစွန်ခြောက်ပါ ထည့်ထောင်းပါ။ ပြီးနောက် ငပိ၊ ငံပြာရည်နဲ့ အရသာမှုန့်များကို ထည့်ထောင်းပါ။ နောက်ဆုံးတွင် ရှောက်သီး(သို့)သံပုရာသီး အရည်အနည်းငယ်ကို ညှစ်ပြီးထောင်းပါ…. ခံတွင်းမြိန်၊ ထမင်းမြိန်စေတဲ့ ငပိထောင်းလေးရပါပြီရှင်…
အရင်ဆုံး ငါးပနော်ကိုရေဆေးသန့်စင် ဓားနဲ့၂ချက်စီလောက်မွှန်းပြီး မီးကင်ပါ။ (မီးသွေးမီးဖိုနဲ့ ငါးကိုဖုတ်ရင်ပိုမွှေးပါတယ်)။ အထဲကလဲကျက် မွှေးလဲမွှေးလာအောင်ကင်ပါ။ ငါးကင်လို့ပြီးရင် အရိုးနွှင်ပြီး အသားလေးတွေ ဖွထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့၊ ငရုတ်သီးစိမ်းလှော်ကို မညက်တညက်လေးစထောင်းပါ။ ပြီးရင် ငါးကင်ကို ဆား၊ အရသာမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ဖွဖွလေးထောင်းပါ။ နောက်ဆုံးမှ နံနံပင်လေးညှပ်ထည့်၊ ပဲဆီစိမ်းလေးလောင်းပြီး ဖွဖွနယ်ရင်ရပါပြီ။ သူကအဆိမ့်အရသာလေးစားရတာမို့ ဆား၊ အရသာမှုန့်ကိုလျှော့ထည့်ပါ။
ဗူးသီးဟင်းခါးလေးတခွက်ပါရင်တော့ တခြားဘာဟင်းမှတောင် မလိုတော့ဘူး….
အရင်ဆုံး ဂွေးသီးကိုရေဆေးပြီး အခွံခွာပါးပါးလှီးထားပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကို မွှေးနေအောင်လှော်ထားပါ။ ပုဇွန်ခြောက်ကို ညက်အောင်ထောင်း၊ ညက်လာရင် ကြက်သွန်ဖြူထည့်ထောင်း၊ ပြီးရင် ဂွေးသီးနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ အရသာမှုန့်နဲ့ ဆားထည့်ထောင်းပါ။ ညက်လာရင် ပန်းကန်ထဲထည့်အပေါ်က ပဲဆီစိမ်းလေးဆမ်းပြီး စားလို့ရပါပြီ……
Previous post ကျောပိုးအိတ်ဖိုး မတတ်နိုင်လို့ သားဖြစ်သူအတွက် ကျောပိုးအိတ်လေးကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်
Next post အောင်ရဲလင်းကို ကြိတ် Crush နေတယ်လို့ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ